Muxuu ka yiri Santiago Solari kadib markii uu leeliyay kooxda Real Madrid kulankiisii ugu horeeyay? – Gool FM
Muxuu ka yiri Santiago Solari kadib markii uu leeliyay kooxda Real Madrid kulankiisii ugu horeeyay?
(Real Madrid) 01 Nove 2018. Tababaraha ku meel gaarka ah ee kooxda Real Madrid Santiago Solari ayaa la hadlay saxaafada kadib guushii 4-0 ahayd ay kaga gaareen kooxda Melilla kulankii Copa del Rey.
Santiago Solari ayaa imtixaankiisii ugu horeeyay kaga gudbay si guul ah, kadib markii madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Pérez uu si ku meel gaar ah ugu magacaabay inuu noqdo badalka Julen Lopetegui oo shaqada laga ceyriyay.
Tababaraha reer Argentina ayaa dareen farxad leh ka muujiyay qaab ceiyaareedka kooxda, isagoo amaan kala dul dhacay kabtanka kooxda Sergio Ramos iyo xidiga reer Brazil ee Vinícius Jr, kaasoo sameeyay kulan cajiib ah.
“Waxaan u ciyaarnay si farxad, xamaasad iyo kalsooni leh, ma ahayn kulan fudud, waa inaan ku faraxsanaanaa guushan”.
“Balan qaadka ciyaartoyda ma ahan mid aniga igu xiran, balse waa Maaliyada, taageerayaasha, hey’adan iyo aniga oo halkan kula sugan, dhamaanteen waxaanahay koox mid ah”.
“Vinícius Jr waa xidig da’ayar ah, wuxuu jiraa 18 sano kaliya, wuxuu hada yimid wadan cusub, wuxuu la qabsanayaa jawiga cusub ee kooxda Real Madrid si tartiib tartiib ah, waa mid sii koraya ee qaan gaaraya, sababtoo ah dhab ahaantii waxaan daawanay qaab ciyaareedkiisa, aad ayaan ugu faraxsanahay inuu ciyaaro 90-ka daqiiqo ee dhameystiran”.
“Ramos marwalba wuxuu diyaar u yahay inuu ka ciyaaro bilowga, waa kabtanka markabkan, waa muhiim inuu yimaado uu hogaamiyo kooxdan kadib xaaladihii adkaa, waxaana ku faraxsanahay, xirfada, xiisaha iyo farxada ay kooxda muujisay”.
“Cristiano Ronaldo wuxuu u qalmaa inuu ku guuleysto abaal marinta Ballon d'Or”